Image caption Ozil sadexley ayuu ka dhaliyey kooxda Ludogorets ciyaartii ugu dambeysay ee Emirates
Taageerayaasha Arsenal oo warfarxad leh u soo yeeray
Taageerayaasha Arsenal inkastoo ay wadnaha farta ku hayaan ciyaarta sabtida ee Manchester United martida u yihiin, haddana war wanaagsan ayaa u soo yeeraya kaasi oo sheegaya in xiddiga kubadda qaabeeya ee reer Garmany Mesut Ozil uu ku dhawyahay heshiis uu qalinka ku duugo oo suurtagal ka dhigaya in uu kooxda sii joogo, BBC-da ayaa ka soo xigatay wargeyska Daily Mirror in ay dhici karto in Ozil uu ogolaado heshiis cusub isagoo todobaadkii jeebkiisa ku ridan doona aduun lacageed oo gaaraya ku dhawaad 250 kun oo doolar.
Ozil oo 28 sano jir ah waxaa heshiiska Arsenal uu kula jiro uga dhiman 18 bilood oo kaliya, isagoo haatan qaata 140 kun oo giniga Istarliinka oo 180- kun oo doolar.
Haddii Heshiiskan uu saxiixo waxay ka dhigaysa Ozil ciyaartoyga ugu mushaarka wanaagsan koxodiisa.
Wargeyska Mirror wuxuu leeyahay wuxuu Ozil dhawaan guri qiimihiisu yahay 12 milayn oo doolar kaga iibsaday magaalada London, taasi oo loo fasirtay in uu sii joogo magaaladan.
Ivan Rakitic oo geeska galiyey in dalab uga yimid kooxda Manchester United.
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona Ivan Rakitic ayaa la sheegay in uu geeska galiyey dalab uga yimid kooxda Manchester United.
Wargeyska Daily Star oo BBC-du soo xigatay ayaa sheegay in tababare Jose Mourinho uu quudaranayo in uu la soo wareego laacibka reer Karooshiya xagaagga soo socda iyadoo lagu qiimeeyey ku dhawaad 40 milyan oo doolar qiimaha uu ku kici karo.
Laakiin wakiilkiisa Arturo Canales ayaa sheegay in macmiilkiisu uu ku faraxsan yahay sii joogista kooxda Barcelona isagoo filaya in uu dhamaysto heshiiskiisa oo ku eg 2019.
Spain ma ku badin doontaa Garoonka Wembley 35 sano markii ugu horreysay?
Image caption David Silva ayaa la filayaa in caawa Spain u safto
Xulka qaranka Spain ee caawa ciyaar saaxiibtinimmo kula leh garoonka caanka ah ee Wembley ee galbeedka London xulka qaranka Ingiriiska ayaa waxaa ka maqan ciyaartoy muhiim ah oo udub dhexaad u ah guulaha qarankaas.
Inkastoo Spain ugu dambasay inay ku badiso garoonka Wemley35 sano ka hor haddana 4 ka mid ah 5-tii kulan ee ugu dambeysay ee ay kulmeen xulalkan Spain iyo England waxaa 4 ka mid ah badiyey xulka Spain.
Laakiin caawa waxaa Spain ka maqan ciyaaryahanadda Gerard Pique, Sergio Ramos, Andres Iniesta & Jordi Alba kuwaasi oo qaba dhaawacyo kala duwan
Laakiin tababaraha Spain Julen Lopetegui arintaasi walaac kuma hayso wuxuuna filayaa in ay u joogaan ciyaaryahanno muhiim ah, waxaana la filaya in uu ku bilaabo ciyartooy Premier League-ga ka ciyaara oo ay ka mid yihiin David de Gea-ha Manchester United Arsenal, Nacho Monreal,Arsenal daafaca uga ciyaara iyo kubad sameeyaha kooxda Manchester City David Silva.